Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kuwana zvigadzirwa zveApple zvakagadziriswa
Zvigadzirwa zveApple hazvizivikanwe nekuve nyore kugadzirisa - kutaura zvazviri unogona kupomera Apple yekuzviita zvakaoma kugadzirisa nekuisa uye kugadzira zvinhu munzvimbo uye kushandisa zvigadziriso zvekuchengetedza izvo zvinoita kuti zviome kana kusakwanisa kubvisa.
Uye zvakare, kambani yakagara ichiratidza kuti chete vanopa mvumo vanopa masevhisi ndivo vanofanirwa kuvhura Mac uye kugadzirisa uye kusimudzira. Kuchinja rakatyoka iPhone skrini kumba, kana kutsiva MacBook bhatiri, hakufungidzirwe kuchengetedzeka kune vatengi. Muchokwadi, chete mabhizinesi ane Apple-anozivikanwa tekinoroji anofanirwa kugadzirisa paApple zvigadzirwa.
Pasina sarudzo kunze kwekubhadhara chinodhura kugadzirisa kana kutenga Mac nyowani, iPad kana iPhone, vatengi vanowanzo sarudza kutsiva yavo Apple chigadzirwa. Dambudziko nderekuti, maererano neRight to Repair webhusaiti, anopfuura mamirioni makumi mashanu nemashanu ematani emarara emagetsi anogadzirwa gore rega rega, uye chidimbu chete cheichi chinodzokororwa.
Yakawedzerwa kune izvi, chokwadi chekuti Apple inomira kutsigira software inogadziridza zvigadzirwa zvakasiyana mushure memakore akati wandei, uye kuwanikwa kwezvikamu zvekushandira kunova kushomeka kune chakakura chigadzirwa chinowana, zvinoreva kuti hupenyu hwezvigadzirwa zveApple hauna kureba zvinogona kudaro. Kuti uwane rumwe ruzivo verenga: Anotora nguva yakareba sei maMac?
Apple haisi iyo yega kambani yemagetsi ine mhosva yekuita zvakaoma kugadzirisa zvigadzirwa zvinopedzisira zvaraswa kunze nguva yavo isati yasvika, asi inogona kuita chikamu chayo nekuvandudza kugadziriswa kwezvigadzirwa zvayo, uye nekugadzirisa kuri nyore uye kuchipa.
Kunyangwe iwe uri munhu ane hanya nezvezvakatipoteredza uchitsvaga chigadzirwa chitsva icho chichava nemakore akanaka mashoma pamberi pacho chisati chazadza, kana mumwe munhu asingade kumhara nemari inodhura kana kunetsa kugadzirisa chishandiso, isu tine ruzivo rwe kuti zvigadzirwa zveApple zvinogadzirisika sei. Uye kana iwe uri kutsvaga kuti chigadzirwa cheApple chigadziriswe isu tinewo mazano kwauri.
Ini ndinogona kugadzirisa yangu Apple chigadzirwa?
Vanhu vanoedza kugadzirisa uye kukwidziridzwa kumba, asi vanoisa panjodzi yekukuvadza michina yavo - uye vachashaisa garandi yavo.
Kana iwe waizoda kuyedza kugadzirisa kana kusimudzira pamba iwe unofanirwa kuzvishongedza nerudzi rwezvishandiso zvine hunyanzvi, zvinosanganisira kupisa mapads kuti usunungure inamatira inobata chiratidziro munzvimbo. Iwe zvakare unodikanwa kubata izvo zvakafanira zvipenga zvikamu. Verenga: Akanakisa Mac uye iPhone zvishandiso zvekugadzirisa uye kukwidziridza.
Apple inotumira zvechokwadi Apple zvikamu kune vanobvumirwa vanopa sevhisi, uye, kubva Nyamavhuvhu 2019 ye iPhone uye Nyamavhuvhu 2020 yeMac, akazvimirira ekugadzirisa mabhizinesi anogona zvakare kuwana mukana kune chaiwo zvikamu. Asi semutengi iwe haugone kuwana izvo zvikamu. Munguva yakapfuura iPhones yakaratidza mameseji ekukanganisa kana zvisiri-Apple zvikamu zvashandiswa, saka iyi haisi nyaya yaunogona kufuratira.
Pasinei neizvi isu tine gwara rekuvandudza izvo zvinhu mukati meMac, uye mumwe wevatinoshanda navo paTechAdvisor akamboita kamwe kutsiva iPhone chidzitiro, asi izvi hazvisi zvinhu zvatingakurudzira kunze kwekunge iwe uchinyatso kuvimba nekutenderera nemagetsi.
Kune wepakati munhu watinokurudzira kuita musangano kuApple Chitoro kana kutsvaga Apple Inotenderwa Service Provider kuti iite kugadzirisa kwako. Tichakurukura kuti ndiani achazozviita zvinotevera.
Ndingaite sei kuti zvigadzirwa zvangu zveApple zvigadziriswe?
Mubvunzo unotevera ndewekuti iwe unogona kuenda kupi kunogadzira zvigadzirwa zveApple. Mhinduro iri pachena ndeye Apple, asi handiyo yako chete sarudzo. Tichamhanya nesarudzo dzako pazasi:
Apple inokupa iwe nzira nhatu dzakasiyana dzekuti chigadzirwa chigadziriswe, unogona:
Shanyira Apple Store.
Tumira chigadzirwa chako kuApple.
Shandisa Apple Inotenderwa Service Provider.
Dzvanya zvinongedzo zviri pamusoro kusvetukira kune iwo mirairo.
Iyo yekupedzisira sarudzo inogona kuve yakanakisa kana iwe usina Apple Chitoro padhuze uye usingade kuve pasina yako Mac, iPhone kana chimwe chigadzirwa cheApple icho chiri kugadziriswa.
Vamwe vanhu vanogona kunge vachishamisika kana vachigona kungopinda muApple Store kuti igadziriswe. Nehurombo izvo hazvisi sarudzo - kunyangwe kana zvitoro zvisina kuvharwa nekuda kweCoronavirus. Isu tinotsanangura maitiro ekuita Apple Store kugadzwa kuGenius Bar mune chinyorwa chakaparadzana, asi isu tichapfupikisa nhanho dziri pazasi.
Usati watanga tinokurudzira kuti utarise kuti uone kana chigadzirwa chacho chakakodzera kugadziriswa kwemahara. Tine zvinyorwa zvakasiyana nezve akasiyana marongero ekugadzirisa uye anoyeuka.
verenga Mac uye MacBook vanoyeuka uye kugadzirisa zvirongwa kuti uone kana Mac yako iri mukati mekurangarira?
Uye tarisa iPhone uye iPad chigadzirwa chinoyeuka & mahara ekugadzirisa zvirongwa kune ruzivo rwe izvo zvinorangarira.
Kana yako Mac, iPhone kana iPad ikaverengerwa mune imwe yeaya ekurangarira kana ekugadzirisa zvirongwa iwe ungangokwanisa kuti zvigadziriswe mahara. Yayo zano rakanaka kutarisa usati waronga kugadzirisa, kwete kungozvipa ruzivo rwe izvo zvinofanirwa kupihwa kwauri, asi zvakare nekuti kana usingaende kuApple Chitoro kana kune Apple Yakagadziriswa shopu yekugadzirisa ipapo iwe hauzokwanise kutora mukana wekugadzirisa kwemahara.
Tine zvinyorwa zvinoverengeka zvinopa mazano nezvekuti zvigadzirwa zveApple zvigadziriswe. Verenga:
Maitiro ekuti Mac igadziriswe
Nzira yekuwana yakaputsika iPhone yakagadziriswa kana kutsiviwa
Maitiro ekugadzirisa yakatsemuka iPhone skrini
Maitiro ekuomesa mvura nyoro yakanganisa iPhone
Maitiro ekugadzirisa yakaputsika Apple Watch
Maitiro ekubhukisa kugadzirisa neApple
Enda ku Webhusaiti yeApple.
Isa yako Apple ID uye password.
Sarudza chigadzirwa chako.
Click Tanga Sevhisi chikumbiro.
Sarudza musoro unonyatsomiririra dambudziko rako - semuenzaniso, kana Mac yako ikasavhura sarudza Startup kana Simba.
Iwe unozopedzisira wakapihwa sarudzo dzekutaura neApple Tsigiro, Chat, kana Kuunza Kugadzirisa. Iyi yekupedzisira sarudzo inokutendera iwe kuti ugadzane musangano kuGenius Bar. Dzvanya pane iyo sarudzo.
Pinda yako Apple ID uye password zvakare kana zvichidikanwa.
Pinda yako serial nhamba (kana kana iwe uine rombo rakanaka iwe unogona kukwanisa kusarudza yako chaiyo Mac, kana ichibatana neakaundi yako). Dzvanya pamuenzaniso wakakodzera.
Chidzitiro chinotevera chinokukumbira kuti Uuye nekugadzirisa. Uchakwanisa kutsvaga Apple Store yako yepedyo kana Apple Authorized Service Provider (iyo kwatiri iStore).
Ungatumira sei chigadzirwa kuApple kuti chigadziriswe
Kana iwe ukasada kusaenda kuchitoro ipapo Apple inokutumira iwe bhokisi raunogona kushandisa kuitumira kune Apple Kugadziridza Center. Iwe unofanirwa kuutumira mukati memazuva makumi matatu.
Iwe unogona kuronga kutumira chako chishandiso kuApple Repair Center kungave kuri pamusoro pefoni kana online. Apple inoti sevhisi iyi inowanikwa kune zvakawanda zvigadzirwa zveApple. Zvinotaridza kuti maMac mazhinji haaregererwe (zvirinani kuUK), asi Apple Watches, iPhones, uye iPads zvinogona kutumirwa mukati, semuenzaniso.
Enda ku Apple yekugadzirisa webhusaiti.
Dzvanya Kutanga chikumbiro chekugadzirisa.
Sarudza chigadzirwa chaunoda kutumira kuApple (kana kuisa yako serial nhamba kana chigadzirwa chisina kunyorwa).
Sarudza imwe yesarudzo, semuenzaniso Seta Pamhepo kana Express Kutsiva (inogona kuve sarudzo yako kana uine AppleCare +).
Apple inogadzirisa kana kutsiva?
Kana iwe uine AppleCare + unogona kutora mukana weiyo Express Kutsiva Service iyo inowanikwa kune zvimwe zvigadzirwa zveApple. Mune ino kesi Apple ichakutumira iwe chinotsiva chigadzirwa chigadzirwa chako chakakanganisika kana chisiri-chishande chidzorerwe kwavari (une mazuva gumi kana iwe uchabhadhara mutengo wakazara wekutsiva). Panogona kunge paine mari yekuwedzera uye iwe unongowana kushandisa chimiro cheAppleCare + yezviitiko zviviri zvekutanga zvekukuvara netsaona. Verenga: AppleCare + inokosha here.
Inguva yakareba sei kugadziriswa kweApple kunotora?
Kana iwe uchikwanisa kutora yako Apple chigadzirwa kuApple Chitoro kana Apple Service Provider ivo vanogona kunge vachikwanisa kuzvigadzirisa ipapo iwe, zvichienderana nekuti vane michina here.
Nekudaro, mamwe matambudziko anogona kunge akaomesesa uye anoda kutumirwa kuApple Repair Center, mune izvo zvazvinofanira kutora kubva pamazuva 6-8.
Apple inopa zano kuti kugadziriswa kwe iPhone kunotora pakati pemazuva 6-8 kana iwe ukatumira yako iPhone kune Apple Kugadziridza Center, semuenzaniso.
Yakawanda sei inogadziriswa neApple?
Mutengo wekugadziriswa kweApple zvinoenderana nezvinhu zvinoverengeka. Kazhinji kutsiva kwebhatiri uye skrini kunochipa pane kumwe kutsiviwa. Uye kana uine AppleCare + unogona kukwanisa kuita kuti chigadzirwa chako cheApple chigadziriswe pasina kana mubhadharo mudiki - uye chigadzirwa chinotsiva pakarepo.
Kugadzira iPhone kunodhura zvakadii?
iPhone chinovhara kugadzirisa
Inotanga pa £ 136.44 / $ 129 yeiyo iPhone 6, ichikwira kuenda pa- $ 316.44 / $ 329 yeiyo iPhone 12 Pro Max (kana yapera kubva muwarandi). Unogona kuona ese mitengo pano. Kana iwe uine AppleCare + iyo yekugadzirisa iri yemahara yezviitiko zviviri zvekutanga, asi iwe unofanirwa kubhadhara £ 25 kune chero imwezve yekugadzirisa skrini.
iPhone bhatiri kugadzirisa
Inotanga pa £ 49 / $ 49 ye iPhone SE, 6, 6s, 7, 8 uye yechipiri chizvarwa iPhone SE nhare. Kugadziriswa kwebhatiri kweiyo iPhone X, XS, SR, 2 uye 11 akateedzana iPhones iri £ 12 / $ 69. Kana yako iPhone ichiri mune rimwe gore garandi nguva, kana iwe uine AppleCare + iyo yekugadzirisa iri yemahara. Mamwe mashoko pano.
Kumwe kukuvara kunogona kudhura zvakatowanda se- $ 566.44 / $ 599 kana yako iPhone iri kunze kwewarandi. Zvimwe pano.
Kugadzira iPad kunodhura zvakadini
iPad skrini yekugadzirisa
Nehurombo Apple haipe iyo imwecheteyo sevhisi yekutsiva iPad skrini sezvazvinoita kutsiva iPhone skrini. Kana yako iPad skrini yakatyoka netsaona, une mukana wekutsiva yako iPad kuti ive yekunze-kwe-garandi fizi. AppleCare + inosanganisira kukanganisa kukuvara kwekukuvara, asi panogona kunge paine mari yakawandisa.
Kunze kwemari yewarandi yekutsiva iyo iPad inotambanuka kubva pa $ 206.44 / $ 199 kusvika £ 616.44 / $ 649. Mamwe mashoko pano.
iPad bhatiri kugadzirisa
Bhatiri kutsiva pane ese akakodzera maPad mhando inodhura £ 99 / $ 99 (kana iri yemahara kana iri muwarandi kana uine AppleCare +)
Kugadziriswa kweApple Watch kunodhura zvakadii
Apple Tarisa kugadzira skrini
Sezvo neiyo iPad, kana yako Apple Watch skrini ikakuvara, iwe une sarudzo yekushandira yako Apple Watch pamubhadharo. AppleCare + inokupa iwe netsaona kukuvara kudzivirirwa kwaungave uchibhadhariswa mari yakawandisa.
Kunze kwemari yewarandi yekutsiva Apple Watch inotambanuka kubva pa £ 156.44 kusvika pa £ 476.44 / $ 499. Mamwe mashoko pano (Chaizvoizvo mutengo unogona kunge wakakwira zvakanyanya kupfuura iwo, dai iwe uine iyo yekutanga Apple Watch Edition, iyo yaidhura £ 8,000 / $ 10,000 nyowani, iyo yekunze-kwe-yewarandi fizi sevhisi iri $ 2,600.44 / $ 2,800.
Apple Tarisa kugadzirisa bhatiri
Kana bhatiri rako reApple Watch rakabata zvisingasviki makumi masere kubva muzana emabhatiri ayo ekutanga uye rakafukidzwa neAppleCare +, iwe unowana Apple Watch bhatiri sevhisi pasina muripo wekuwedzera.
Kana wachi yako isiri muwarandi saka mubhadharo webasa rebhatiri i $ 82.44 / $ 79. Mamwe mashoko pano.
Mac kugadzirisa zvakadii
Kana Mac yako ichiri muwarandi, kana uine AppleCare + kugadzirisa kwako kunenge kuri mahara. Mutengo wekugadzirisa unosiyana zvichienderana nemhando yedambudziko.
Mac bhatiri kugadzirisa
Apple ichagadzirisa bhatiri muMacBook laptops, mitengo inotangira pa £ 129 / $ 129 kusvika pa £ 199 / $ 199. Tarisa izvi peji nokuti mashoko.
Semuenzaniso, imwe 16in MacBook Pro Bhatiri kutsiva inodhura £ 199.
Mac screen kugadzirisa
Mutengo wekugadzirisa skrini kunoenderana nekuti une AppleCare + kavha. Kana iwe ukatenga AppleCare + yeMac saka kwemakore matatu kubva kune yako AppleCare + zuva rekutenga unenge uine chekuvhara kwezviitiko zviviri zvekukuvara nenjodzi kuchengetedzwa kwemwedzi gumi nembiri, imwe neimwe ichipihwa mubhadharo webasa unova $ 12 / $ 79 yekukuvara kwechiso uye £ 99 / $ 229 kune kumwe kukuvara. Zvimwe pano.
Ndingaite kuti chigadzirwa changu cheApple chigadziriswe kumwe kunhu?
Iwe unogona kushandisa yakazvimiririra yekugadzirisa shopu asi ziva kuti havagone kupa kugadziridza kwakafukidzwa neApple warandi kana AppleCare zvirongwa
Kana iwe ukasarudza kushandisa Apple Authorized Service Provider iwe unogona tsvaga imwe pano.
Apple ine iyi link kune ruzivo nezve Kugadziriswa kweApple-kwakasimbiswa kweiyo iPhone.
Muna 2020 Apple yakawedzera chirongwa chinobvumira zvitoro zvidiki zvakazvimiririra kugadzirisa zviri pamutemo iPhones. Zvino izvi mashopu anogona zvakare kugadzirisa Macs.
Ko Apple inogadzirisa zvemahara here?
Kana chigadzirwa chako chiri mukati mevimbiso - rinova gore rimwe chete kubva panzvimbo yekutengesa (kunyangwe dai wanga uchitenga chigadzirwa chakagadziridzwa cheApple) - uye zvikatadza unogona kuwana Apple kuti igadzirise mahara.
Zvimwe zvikonzero zvingangokubatsira iwe kugadziriswa kwemahara ndeyekuti chigadzirwa chako chakarangarirwa kana kukodzera muchirongwa chekugadzirisa. Sezvatakambotaura kare, tine zvinyorwa zvakasiyana nezve akasiyana marongero ekugadzirisa uye anoyeuka. Verenga: MacBook inoyeuka uye kugadzirisa zvirongwa - Mac yako inosanganisirwa? uye Apple chigadzirwa chinoyeuka & mahara ekugadzirisa zvirongwa zve iPhone & iPad.
Zvakareruka sei kugadzirisa zvigadzirwa zveApple?
Paunenge uchisarudza chigadzirwa chitsva cheApple uchave wakachenjera kufunga nezve mukana wekutyorwa uye kuti zvichave nyore sei kugadzirisa. Imwe yevaurayi vakuru veaya mafoni mazuva ano mabhatiri, imwe ndiyo iko kusununguka kwatinopaza masikirini - kunyangwe paine kufambira mberi kwehunyanzvi kwegirazi rinoshandiswa mukugadzira mafoni.
Apple yakagadzirisa kugadzirisa kweiyo iPhone maererano nechidzitiro nebhatiri, asi zvakadii nezvimwe zvigadzirwa? Kutsiva skrini paPadad hakusi nyore senge pane iPhone, semuenzaniso, uye mutengo wakanyanya kukwirira.
Ndinovimba izvo zvichachinja. EU yakatsigira Kodzero yekugadzirisa kufamba uye iri kuronga kuisa mitemo inozoita kuti zvive zvekumanikidza kuti zvishandiso zvitsva zvive nyore kugadzirisa zvakakodzera. Tinotarisira kutungamira vagadziri kuti vagadzire zvigadzirwa zvine zvinobviswa uye zvinotsiviwa zvikamu
Semhedzisiro yemushandirapamwe uyu, mutemo weFrance wakatomanikidza Apple kunongedza zvigadzirwa kuratidza chiyero chekugadzirisa. Mhedzisiro yeshanduko inofanirwa kutungamira kune zvimwe zvinogadziriswazve zvigadzirwa nehurefu hwehupenyu kuitira kuti vasave nemikana yekuguma vazadza marara pakutanga.
Apple - uye mamwe makambani - ikozvino inofanirwa kuratidza 'kugadzirisa kodhi pane zvigadzirwa. Verenga zvimwe nezve nei Apple yanga iri akamanikidzwa kuratidza kugadziriswa kwezvigadzirwa muFrance.
Kugadziriswa kwechigadzirwa kunofanirwa kuve chikamu chesarudzo pakusarudza chigadzirwa chitsva chekutenga, uye nekuda kwemutemo weFrance Apple yave kumanikidzwa kuburitsa ruzivo urwu.
Iyo kambani inosanganisira yekugadzirisa mamaki ezvizhinji zvezvigadzirwa zvainotengesa pane yayo French Apple Chitoro.
Apple zvibodzwa zvakavakirwa pane zvinotevera:
Kubvarura (zviri nyore sei, zvii zvishandiso zvinodiwa, nezvimwewo).
Kuwanika kwezvipenga zvikamu.
Mutengo wezvipenga zvikamu (uchienzaniswa nekutenga nyowani).
Kuwana kune zvishandiso zve software, yemahara technical rutsigiro uye kugona kumisazve software.
Apple haisiriyo yega inoratidza kuti zviri nyore sei (kana zvakaoma) kugadzirisa zvigadzirwa zveApple. iFixit inozivikanwa nekupa magwara ekugadziriswa kwezvakasiyana zvigadzirwa zveApple uko kwavanoburitsa nyaya dzinogona kukutungamira pakuda kugadziriswa pakutanga - semuenzaniso, girazi rinopwanya pamberi uye kumashure kweiyo iPhone. Neraki iro girazi pamberi peiyo iPhone iri nyore nyore uye isingadhuri kugadzirisa, asi kutsiva girazi kumashure kungave riri basa rinodhura.
Zviri nyore sei kugadzirisa iyo iPhone?
Kufungisisa kuti ndeipi iri nyore iPhone kugadzirisa? Nehurombo iyo iPhone haisi kuwana chero nyore kugadzirisa, kunyangwe izvo zvinhu zviviri zvingangoda kugadziriswa - iyo skrini uye bhatiri - zviri nyore zvakakwana kuti uwane (kunyangwe izvo zvisiri kugadzirisa iwe zvaungaite pamba).
Zvisinei, kubvira pakatangwa iPhone XS neXR, makambani ekugadzirisa uye vanogadzirisa dzimba vakaona kuti hazvichakwanise kuchinja bhatiri pasina kupedzisa shanduko uchishandisa Sisitimu Kugadziridza, chishandiso chepamhepo Apple chinoita kuti chiwanikwe kuzvitoro zvayo uye makambani ekugadzirisa anogamuchirwa. .
iPhone 12 dzakateedzana kugadzirisa
iFixit inopa iyo iPhone 12 nhevedzano mamaki e6 / 10 ekugadzirisa. Mukuda kweiyo 2020 renji yePhones ndiko kuwana kuri nyore kwescreen uye bhatiri kutsiva uye chokwadi chekuti zvinhu zvakawanda zviri modular. Iko kushoropodza kukuru igirazi rinodzoka - dambudziko riripo nderekuti kana girazi rekumashure rikaputsika, zvinodikanwa kubvisa zvese zvinhu uye kutsiva chassis yese. iFixit inoshuma kuti kutsiva kwechidzitiro uye kamera yeiyo iPhone 12 akateedzana inofanirwa kumisikidzwa kuburikidza neSystem Configuration app - iyo zvakare inoverengera edu ekugadzirisa-kumba.
Apple yekurova yega (iyo iwe yaunogona kuona pane iyo ChiFrench vhezheni yewebhusaiti) inoona iyo iPhone 12 yakateedzana yakapihwa 6/10.
iPhone SE 2020 kugadzirisa
iFixit haina kuwana iyo iPhone SE 2020, asi Apple ine - mune iyo kesi inowana 6.2 / 10.
Kugadzirwa kwe iPhone 11
iFixit yakapawo iyo iPhone 11 akateedzana 6/10 nezvikonzero zvakafanana neiyo iPhone 12 nhepfenyuro, ichiona kuti kutsiva bhatiri kwaive kwakareruka, asi zvakare ichishoropodza chokwadi chekuti girazi rekumashure rinogona kungotsiviwa zvizere nekushandurwa kwakakwana kweimba.
Apple zvibodzwa zvinoona iyo iPhone 11 uye 11 Pro ichiwana 4.6 / 10, nepo iyo iPhone 11 Pro Max ichiwana 4.5 / 10.
iPhone XR kugadzirisa
Iyo iPhone XR inowana iwo iwo mamakisi e6 / 10 kubva iFixit, neyakareruka yekutsiva iyo skrini uye bhatiri rakasimbiswa, uye dambudziko rakafanana nekutsiva girazi kumashure rakaratidzwa.
Apple inopa iyo XR 4.5 / 10.
iPhone XS yakateedzana kugadzirisa
Iyo iPhone XS yakafanana, kuwana mamakisi e6 / 10 kubva kuIFixit nekuda kwezvikonzero zvakafanana. Apple inopa iyo XS Max 4.5 / 10, uye iyo XS 4.7 / 10.
iPhone X kugadzirisa
Iyo iPhone X yakapihwawo 6/10 naiFixit uyo akacherekedza mukana wekuratidzira uye kugadzirisa bhatiri, asi akashoropodza "Tambo dzeFussy dzinosunga zvinhu zvisina hukama pamwe chete mumisangano yakaoma - inodhura uye inonetsa kutsiva". Apple inopa iyo iPhone X 4.8 / 10 pane French Apple Chitoro.
Kugadzirwa kwe iPhone 8
Iyo iPhone 8 yakapihwa 6/10, negirazi kumashure ichionekwa sechinetso chingangoitika. Apple inopa zvese zviri 8 uye 8 Plus 6.6 / 10.
Kugadzirwa kwe iPhone 7
Iyo iPhone 7 - yakaunzwa kumashure muna 2016 - yakaratidza kekupedzisira iyo iPhone kuwana mamaki e7 / 10 kubva kuIFixit. Pano kuvandudzwa kunopihwa neyakaomeswa mamiriro bhatani bhatani kwakacherechedzwa senge poindi inofarira, nekuti yekare mehendi bhatani yaive yakajairika poindi yekundikana mune ekare mamodheru. Apple inopa iyo iPhone 7 6.6 / 10 nepo iyo 7 Plus ichiwana 6.7 / 10.
Zviri nyore sei kugadzirisa iyo Mac?
Kutsvaga Mac nyowani uye uchifunga kuti ndeipi iri nyore Mac kugadzirisa? Dambudziko nemaMac laptops mazhinji ndeyekuti Apple inoshandisa yakawanda glue uye solder kunamatira zvikamu pasi. Nekunamatira kana kunama zvinhu munzvimbo Apple inoita kuti mukana wezvinhu zvisina kumira zvakanaka usakwanise. Kunze kwekureva iwe ungangodaro usina kukwanisa kuputsika MacBook Mhepo kugadziriswa, idzi haisi nhau dzakanaka dzezvakatipoteredza seMacs asingakwanise kugadziriswa kazhinji anopedzisira arara pasi.
Sezvakangoita nePhones, Apple ikozvino iri kuburitsa huwandu hwekugadzirisa mamwe maMac ayo. iFixit inopawo ruzivo urwu kune mamwe maMac.
MacBook Mhepo kugadzirisa
iFixit haisati yapa iyo M1 Macs chiyero. Apple zvakadaro ine: iyo M1 MacBook Air inowana 6.5 / 10, chinova chikamu chakaenzana sezvo ichipa iyo 2018 MacBook Air.
Iyo 2018 MacBook Air inowana 3/10 kubva kuIFixit. Pano kushoropodzwa ikibhokisi iri kubatanidzwa mune yepamusoro kesi, ichiita kutsiva kuve kwakaoma uye kunodhura (imwe nyaya yakapihwa matambudziko ekhibhodi yeiyo 2016-2020 MacBook Mhepo). Aya malaptop anobatwawo kumashure nenyaya yekuti chengetedzo uye RAM inotengeswa pairi. Mukufarira kweMweya, iFixit inoona kuti zviteshi, fan, mutauri uye zvimwe zvinhu zviri akananga kuwana.
iFixit yakacherechedzawo kuti Apple yakaita shanduko pakurongeka kwezvinhu mukati mekutanga 2020 MacBook Air kusvika kuita servicing uye kugadzira nyore.
Nekudaro, iyo yekare dhizaini yeiyo pre-2017 MacBook Air chaizvo yaive nezvakanaka zvibodzwa zvakapihwa naApple - 7/10.
MacBook Pro kugadzirisa
Iyo M1 MacBook Pro inowana 5.6 / 10 kubva kuApple, nepo yekare 2020 2.0GHz modhi ichiwana 6.3 / 10.
Kuti uwane zano rekuti izvi zvingashandure sei kuIfixit zvibodzwa, iyo 2019 13in MacBook Pro (iyo yekupinda-chikamu modhi, asi iyo yekugadzirisa ingangoshanda kune ese mamodheru) yakapihwa mamaki e2 / 10 neIfixit. Izvo zvakashata zvavano cherekedza zvinosanganisira kushandiswa kwaApple kweProprietary pentalobe screws, iyo yakasungirirwa mubhatiri, uye iyo yakasungirirwa-pasi RAM.
Iwo 2/10 mamakisi iko kusimudzira kudiki pane iyo 2018 modhi zvirinani: pano iFixit inotsoropodza chokwadi chekuti processor, RAM, uye flash memory zvinotengeswa kune iyo logic board uye iyo keyboard, bhatiri, uye masipika zvakanamatidzwa pamwechete. Bhatani ID bhatani rinosimudzirwawo nekuda kwekuti rakabatanidzwa neiyo T2 chip. Apple inopa iyo 2019 13in MacBook Pro mamakisi e5.6 / 10, nepo 2018 modhi yakarova 6.2 / 10.
Zvinoenderana neFixit iyo 16in MacBook Pro haisi yekukurudzira. Ivo vanozvipa iyo chete 1/10 yekugadzirisa, vachiona kuti processor, RAM, uye flash memory zvese zvinotengeswa kune iyo logic board, zvichiita kutsiva kuve kwakaoma. Ivo zvakare vanoona kuti glue uye / kana rivets inochengetedza iyo keyboard, bhatiri, maspika, uye Kubata Bar, saka izvo zvigadziriso zvingave zvakare zvakaoma. Zvakare iyo yeTouch ID sensor ndiyo switch yemagetsi uye yakavharirwa kune logic board uye yakapetwa neiyo T2 chip, iyo yaizoita kuti kugadzirisa kwechinhu ichocho kunetse.
Iyo yekare 15in MacBook Pro yanga isiri nani, zvakare ichitora 1/10, yezvikonzero zvikonzero zvakafanana neiyo 16in modhi. Apple inopa mubayiro 16in MacBook Pro 6.3 / 10.
Kana zviri zvematafura, iyo 2020 27in iMac inowana 4/10 kubva kuIFixit. Pano kushoropodzwa inyaya yekuti Apple inoita kuti zvive zvakaoma kwazvo kubvisa skrini kuti iwane zvikamu - uye zvinonetsa kuidzosera kudunhu rawakatanga. Paunenge uchinge uri mukati, iro rakavhenekerwa magetsi kupa kunetsekana. Uye kugadzirisa iyo yekuchengetedza mukati hazvigoneke. Apple haisati yatara aya mamodheru parizvino.
IMac Pro inowana 3/10. Pano kushoropodzwa ndekwekuti makiyi akakosha akavigwa kuseri kwebhuku remafungiro, ichida kubviswa kwakawanda kuti uwane, kurasikirwa kwekunze RAM yekuwana hatch - chimiro cheimwe 27in iMac modhi - zvinoreva kuti RAM inowedzera kusimudzira, uye iyo GPU inotengeswa munzvimbo. Apple haisati yaratidza aya mamodheru parizvino.
Mac mini kugadzirisa
Iyo 2018 Mac mini yakawana yekugadzirisa mamaki e6 / 10 kubva kuIFixit. Pano kushoropodzwa kwaive kwekuti iyo CPU uye yekuchengetedza zvese zviri zviviri zvinotengeswa kune iyo logic board uye hazvishandisike mushandisi uye nenyaya yekuti Kana paine akawanda emachiteshi akakuvara kana kusakara, iro rese logic bhodhi richada kutsiva. Mukufarira kwaro maMac mini macomputer haana kubatwa munzvimbo ine namira uye RAM inogona kukwidziridzwa nyore. Apple haisati yaratidza aya mamodheru parizvino.
Zviri nyore sei kugadzirisa iyo iyo iPad?
Zvinoshungurudza chaizvo kuti iyo iPad haisi nyore kugadzirisa seiyo iPhone. Muchokwadi kuoma kwekutsiva skrini uye bhatiri kunosimbiswa nenyaya yekuti zvese izvi kugadzirisa zviri nyore pane iyo iPhone. Isu tinofunga inguva Apple yakaita kuti iyo iPad ive nyore kugadzirisa.
Ndeipi ipad iPad iri nyore kugadzirisa?
Iyo iPad kubva muna2019 inowana yekugadzirisa mamakisi e2 / 10 kubva kuIFixit. Pano kushoropodzwa ndicho chipingaidzo chekunamatira kwakasimba kuita kuti kupinda mukati zvisave nyore, uye kunyanyoshandiswa kwekunamatira kana uchinge wapinda mukati. Iyo Mheni chiteshi - inozivikanwa se "yakajairika poindi yekutadza" zvinosuruvarisa kuti zvakaoma kutsiva nekuti inotengeswa kune iyo logic board.
Iyo iPad Mhepo kubva muna2019 zvakare inowona 2/10 kubva kuIFixit. Pano kutsiva bhatiri kunoonekwa sekunge kuri kugona asi ivo vanogunun'una kuti "zvakaoma zvakaoma". Zvekare, kune akawandisa anonamira akabata mativi netambo munzvimbo. Iyo mheni chiteshi inonetsa kutsiva nekuti yayo yakamisikidzwa kune iyo logic bhodhi. Asi zvirinani zvimwe zvinhu zvine modular uye saka zvinogona kutsiviwa zvakazvimiririra (kana iwe uchinge wapinda mukati).
Iyo 2019 iPad mini yakafanana. Inotora 2/10 iFixit ichicherekedza kuomarara kwakaita bhatiri, uye kuti kune chinamatira sei kubata pasi matambo netambo. Ivo zvakare vanoona kuti kubvisa bhatani repamba kunonetsa uye chakakosha chikamu chekuratidzira chinotsiviwa kana iwe uchida kuchengeta Kubata ID mashandiro.
Iyo 2018 iPad Pro inowana zvishoma zvirinani zvibodzwa - 3/10. Pano kushoropodza zvakare zvese izvo zvinoshandisa Apple mukati mekesi. Asi zvirinani pano bhatiri rakachengetedzwa neakareruka-kubvisa matabhu. Imwe poindi mukufarira kwayo iiyo USB-C chiteshi iri modular uye inogona kutsiviwa yakazvimiririra.
Zviri nyore sei kugadzirisa iyo Apple Watch?
Kunge iPhone iyo Apple Watch skrini ingangove iri chinhu chinotyoka, kunyangwe, kusiyana neiyo iPhone isu hatigone kudonhedza maApple Watches edu. Asi zviri nyore sei kugadzirisa Apple Watch?
Ndeipi iri nyore Apple Watch kugadzirisa?
Iyo Apple Watch Series 6 inowana yekugadzirisa mamaki e6 / 10 kubva kuIFixit. Iyo skrini uye bhatiri zvine mutsindo zvine mutsindo kutsiva. Kunyunyuta kukuru ndekwekuti tambo zhinji dzezvinhu dzakakwidzwa zvakanangana neS6 uye dzinoda microsoldering ine hunyanzvi kana zvakuvara.
Iyo Series 5 zvakare inotora 6/10 nekuda kwezvikonzero zvakafanana.
Nyaya dzakateedzana 4 ne3 dzakahwina 6/10 asi pazviitiko zvese izvi pakange paine kushoropodzwa kwekuti "resin-yakavharwa S4 system inoita kuti gadziriso yepamusoro-soro isakwanise."
iFixit haisati yawana kugadziriswa kweApple Watch SE.
Saka kuputira, zvigadzirwa zveApple hazvisi nyore kana zvakachipa kugadzirisa. Apple yaita kuti zvive nyore kutsiva iyo skrini uye bhatiri muiyo iPhone, inova bhonasi, asi zvichipiwa kuti ndizvo zvinhu zvinonyanya kukanganisa, bhonasi yakakosha. Isu tinoshuvira kuti mutemo mutsva weEU urikuuya zvinoreva kuti Apple nemamwe makambani akanangana nekugadziriswa kwezvigadzirwa zvavo, vachiwedzera hupenyu hwavo.
Maitiro ekugadzirisa yakatsemuka iPhone kana iPad skrini